Fiidiyowga: Mike Blumenthal oo ku saabsan sida loogu darajo Google Local | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Fiidiyowga: Mike Blumenthal oo ku saabsan sida loogu darajo Google Local
Fiidiyowga: Mike Blumenthal oo ku saabsan sida loogu darajo Google Local
Qaybtii saddexaad iyo qaybtii u dambaysay ee wada sheekeysigaygii aan la yeeshay khabiirka SEO ee Mike Blumenthal, waxaan ka wada hadalnay dhowr mowduuc. Muuqaalkani waxa uu ku saabsan yahay 20 daqiiqo oo 45-daqiiqo ah dooddeenna ku saabsan raadinta. Waa kan qaybta koowaad iyo qaybta labaad.
Qaybta seddexaad waxaan ku galeynaa xeelado, waa maxay tillaabooyinka iyo ficillada taatikada ah ee aad qaadi karto si aad ugu darajo wanaagsan Khariidadaha Google iyo Google Local. Waxa uu sharaxay NAP-magaca, ciwaanka iyo lambarka taleefoonka--ma sii aha muhiim. Waxa ugu muhiimsan waa in la helo shabakad wanaagsan, xiriiro wanaagsan, waxyaabo wanaagsan, iyo qaab dhismeed wanaagsan. Dib u eegis iyo tixraacyo wanaagsan ayaa sidoo kale muhiim ah, dabcan, ku habboonaanta iyo fogaanta ayaa dhammaantood door ka ciyaara.
Waxaan ku bixinay waqti fiican oo ku saabsan saameynta COVID-19 ee dib u eegista maxalliga ah ee ganacsiyo badan. Waxaan ka hadalnay bulshada deegaanka SEO iyo wax ka badan.
Qaybo kooban oo muuqda: 9-ka xeer ee tayaynta
Shorts-ga bulshada: Kooxaha TikTok ee leh Shopify, xayeysiisyada ganacsiga ayaa xukuma Facebook, isticmaaleyaasha LinkedIn ayaa ugu sarreeya 722 milyan